Date My Pet » 12 Anofanira Haves For Mrs. Rudyi
1. Munhu ane wakazadzwa nezveupenyu hwake apo tiine nechiyero. Ngazvive kwaari ukama kudanana, nemhuri yake, basa rake, pacharo uye kuzvipira. Munhu ane wakazadzwa pamusoro wake zvinokukanganisa akararama upenyu dzakafuridzirwa. Tinogona zvose kushandisa zvishoma rakafuridzirwa.
2. Munhu ane ushingi kuva pangozi kana zvichidiwa uye dzika apo zvakakodzera. Vasarudza kuzviudza vane kemisitiri naye asi iye anokwanisa kuzochera miganhu zvakajeka kana zvichidiwa.
3. Munhu unogona kuva nokuzvishongedza. Munhu asingadi kumufungira mutongi asi kunanavira kunzwisisa uye kuziva ndiye munhu uyo ​​anogona kubvumirana vasingabvumirani.
4. Munhu compliments ari 3 kuipa zvaunokanganisa pamusoro pako uye ukarumbidza dzavo 3 kuipa zvaunokanganisa. Yokuitirana Zvinokosha. Find munhu anogona kukonzera hwako sezvamakangoitawo vayo. Long unonetesa checklists haasi chinosunungura; chinhu shackle panguva yakanakisisa.
5. Munhu anosarudza kuva nomutsa pane zvakanaka. Kubva hweta kune misha munhu mumugwagwa wakazvipindura.
6. Munhu angati iye urombo. Ndinoona kuti kuda zvikanganiso idanho guru kune yokuporeswa. kazhinji nguva, kuti zvakanaka zvakakwana.
7. Mumwe ari conversationalist huru. Imi chete vanoda kutaura naye nokuti ndiye saka multi-faceted uye kunakidza.
8. Munhu azvakaita kuziva. Iye Anobvunza chete zvinhu zvose, hanya kunatsiridza pacharo uye haaregi kudzidza.
9. Munhu anoda kuenda kuburikidza oma nguva newe. Iye ane kusimba kumira nemi uye kukutsigira kana zvinhu zviri kuenda kumaodzanyemba.
10. Munhu anotora ndamutarisira zvakanaka dzinovaraidza. Anoita chokwadi vane utano, yakachena uye kufara. Kana iye anoti iye anomuda dzinovaraidza asi ivo vari ezvinhu disarray, fungidzira kana iye anokuda? Mazvibata vasakukurwa wangu.
11. Munhu anoramba anoita zvinhu zviduku nokuti imi. Zuva nezuva kuzvitsaurira kuita zvinhu izvi anoti zvizhinji.
12. Mumwe munhu ane maonero yemari zvakafanana. Unoda kuvaka remangwana mari yakatsiga saka unogona kunakidzwa ukama hwako. Chokupedzisira chinhu chaunoda kuita kurwisana nezvemari.